किन बन्यो यो सामान्य तस्विर संसारभर भाइरल ? आखिर के छ यसमा.. « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
किन बन्यो यो सामान्य तस्विर संसारभर भाइरल ? आखिर के छ यसमा..
Posted By OSNepal, California, USA || Date: 16 September, 2017
ओएस नेपाल, भाद्र ३१, ऐजेन्सी – अहिलेको सूचना र सञ्चार तथा इन्टरनेट दुनियाँमा सामान्य मान्छे पनि एकै छिनमा स्टार बन्न सक्छ। एउटा सामान्य तस्बिर पनि छिन भरमै विश्वभर भाईरल बन्न सक्छ। अहिले एउटा सामान्य तस्बिर पछिल्लो केही दिन यता देखि इन्टरनेटमा भाइरल बनेर जताततै छाईरहेको छ ।
अब फोटो किन बन्यो भाइरल
आउनुस्, अब चर्चा गरौँ आखिर यो एउटा सामान्य तस्बिर किन बन्यो एकाएक भाइरल। एक पटक यो फोटोमा ध्यान दिएर हेर्नुस् त! तपाइले सहजै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो फोटो किन चर्चामा आयो ।
अब यी महिलाबाट ध्यान अलिपरको गाडीमा लैजानुस् अनि उक्त गाडीको पहिलो सिटमा हेर्नुस कुकुर बाहेक अरु कोहि पनि देखिंदैन। अनि यो तस्बिर हेरेर कतिले यो गाडि नै कुकुरले चलाएको भने त कतिले भने सोतो कपडामा सजिएकी यी युवतीलाई कुकुरले मज्जाले एकोरिएर हेरेको भन्दै फोटोका नै तारिफ गरिरहेका छन् ।
उडिरहेको हवाईजहाजभित्र नांगै भएर यात्रुले उफ्रिन थालेपछि पाइलटले चाले बाध्य भएर यस्तो कदम
एजेन्सी – अमेरिकाको सिएटलबाट एंकोरेजका लागि उडेको अलास्का एयरलाइन्सको जहाजभित्र..
बिहे गर्दै हुनुहुन्छ ? बिहे गर्नु अगाडि युवतीलाई सोध्नुहोस् यी ५ महत्वपुर्ण प्रश्न !
एजेन्सी । परिबर्तनशिल समय संगै आधुनिक समाजमा मागी विवाह भन्दा..
परफेक्ट टाइममा खिचिएका परफेक्ट तस्विरहरु, जुन हेरेर अचम्म माम्नुहुनेछ !
यी तस्विरमा खासै केही छैन । तर यी तस्विरले तपाईलाई..
संसारकै उदाहरणीय बाबु, अपाङ्ग छोरीलाई जन्म दिएर आमा ७ दिनमै बितिन बाबुले होटलमा भांडा माझेर हुर्काउदै छन् ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं – सामान्यतया एउटी आमाले आफ्ना छोराछोरीको लागि जीवनमा ठूलो..
याद राख्नुहोस ! १२ पाप जसको कहिल्यै क्षमा मिल्दैन
सबै मासिसले धर्म गर्नुपर्छ पाप गर्नुहुदैन भन्छन तर धर्म भनेको..
पत्याउंनु हुन्छ, चीनमा बन्यो अपराधी पत्ता लगाउंने चश्मा
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा चीनले छोटो समयमा लामो फड्को मारेको..
प्रधान सेनापति क्षेत्री र ब्राउनबीच भेटवार्ता
श्रीमती घाइते पारेको अभियोगमा श्रेष्ठ पुर्पक्षमा
समाजसेवामा योगदान गर्नेलाई सम्मान